बल्ड प्रेसर लाे भएका मानिसले सामान्यतय खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
बल्ड प्रेसर लाे भएका मानिसले सामान्यतय खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा अत्याधिक शारिरिक थकान, स्मरण तथा एकाग्र शक्तिमा ह्रास , वाकवाकी लाग्ने , शारिरिक कमजाेरी अादी जस्ताे समस्या हुने गर्छ ।
प्रेसर लाे भएकाले खानैपर्ने केही खानेकुराहरू
१. पात भएको सागसब्जी :
पात भएको सागसब्जीमा आइरन हुन्छ । जुन मानव शरीरको लागि अत्यावश्यक खनिज पदार्थ हो । ब्लड प्रेसरलाई कम गरेर त्यसलाई सामान्य बनाउनका लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सागसब्जीमा प्रोटिन र भिटामिन हुने गर्दछ । ब्लडप्रेसरलाई सामान्य बनाइराख्नका लागि प्रत्येक दिन सागसब्जी खाने गर्नुहोस् ।
डार्क चक्लेटले मुटुको रोगी र कम ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरुका लागि राम्रो मानिन्छ । साथै माहिलाहरूलाइ महिनावरीमा हुने पेट दुखीका लागि समेत राहत मिल्छ ।
बदामले शरिरकाे प्रतिरोध क्षमतालाई बृद्धि गर्ने गर्दछ । यसका साथै यसले रक्तचापलाई नियमित गर्ने गर्दछ त्यसकारण यसलाई दैनिक आहारमा समावेश गर्नुहोस् ।
४. रसिलो पोषिलो झोल पदार्थ : टुसा उम्रेको गेडागुडी र झोलिलो पदार्थ खाँदा शरिरमा उर्जा र राम्ररी रक्तसञ्चार हुन्छ । प्रेसर लो भएको बेला टुसा उम्रेको गेडागुडीको कारण शरीरमा छिटै शक्ति प्राप्त हुन्छ । साथ साथै टुसा उम्रेकाे गेडागुडी मस्तिष्कका लागि पनि निकै उपयाेगी मानिन्छ ।
५. कालो खाद्य पदार्थः
६. अमिलो खाद्य पदार्थः
गर्मीमा अमिलो खाद्य पदार्थ जस्तो सुन्तला आदि स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो हुने गर्दछ किनभने यसमा पानी र एसिड दुबै पाइने हुनाले कम रक्तचाप भएका बिरामीहरुको शरिरमा उर्जा निर्माण गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ ।
यी ४ पेय पदार्थबाट टाढै बस्नुस्,जसले घटाउन सक्छन् इम्युनिटी पावर...
किन पुरुषले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई ?...
सावधान ! यि खानेकुराले झर्छ कपाल...
बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ भने अप्नाउनुहाेस् यस्ताे विधि...